मीनाकुमारी बन्दै सनी - बलिउड - साप्ताहिक
मीनाकुमारी बन्दै सनी
माघ ७, २०७४
सनी लियोनले बलिउडमा आइटम डान्सरका रूपमा जति ख्याति कमाएकी छिन्, त्यति अभिनेत्रीका रूपमा कमाएकी छैनन् । उनले आइटम डान्स गरेका अधिकांश गीत लोकप्रिय भएका छन्, यद्यपि अभिनेत्रीका रूपमा अभिनय गरेका चलचित्र फ्लप ।
रागिनी एमएमएस–२ तथा तेरा इन्तजार जस्ता चलचित्र असफल भएपछि यतिबेला सनी एउटा उत्कृष्ट चलचित्रको पर्खाइमा छिन् । यसबीच सनीले आफ्नो अभिनय कौशल देखाउन सक्ने चलचित्र पाएको चर्चा चलेको छ । उनलाई प्रस्ताव गरिएको उक्त चलचित्रमा उनले ट्रयाजेडी क्विन मीनाकुमारीको चरित्र निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
सनीका लागि यो हालसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्ताव मानिएको छ । त्यसो त यही भूमिकाका लागि विद्या बालन तथा माधुरी दीक्षितसमक्ष पनि प्रस्ताव राखिएको थियो । यद्यपि उनीहरूले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न अस्वीकार गरे । यदि सनी यो भूमिकाका लागि तयार भइन् भने त्यो उनको अभिनय करियरकै उत्कृष्ट निर्णय हुने बताइन्छ ।
प्रकाशित :माघ ७, २०७४
सनी लियोनी अभिनित पासवर्ड हलमा
सनी लियोनको आगमन
सनी लियोन अभिनित नेपाली चलचित्रको ट्रेलर
बुवा बन्दै राजेश हमाल
स्टार किड्सको लर्को
आमा बन्दै पूर्व टेनिस स्टार इभानोभिच
चुपके चुपके निर्माणको पुरानो कथा भाद्र ३१, २०७६
त्यसपछि रिसाइन् हेली वाल्डविन भाद्र ३०, २०७६
निक जोनास र प्रियंकालाई नयाँ पगरी भाद्र २९, २०७६
जान्हवीको नयाँ रंग भाद्र २६, २०७६
चर्चामा अर्को जोडी भाद्र २५, २०७६
साहोको सफलतापछि भाद्र २४, २०७६
एक रातको भेट भाद्र २३, २०७६
मन भरियो कि ? भाद्र ११, २०७६
दीपिका कसरी सधै सुन्दर र फिट छिन् ? भाद्र १०, २०७६
यस्तो पनि लफडा भाद्र १०, २०७६